७० जना कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएको नारायणी अस्पतालमा चुनौतीका चाङ
मेसु डा उपाध्याय भन्छन्– कर्मचारी व्यवस्थापन र पुरानो संरचना हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ
२०७७ जेठ १ बिहीबार १८:३०:०१ प्रकाशित
काठमाडौं– नेपालमा गत मंगलबार एकै दिन ८३ जना नयाँ संक्रमित थपिए। एकै दिन यति धेरै संख्यामा संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक थियो। जसमध्ये ५७ जना पर्साका मात्र थिए।
संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा मात्रै ७० जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। चार जना उपचारपछि वैशाख २४ गते डिस्जार्च भएका थिए। तर त्यसको एक हप्तापछि चारमध्ये दुई जनामा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएका कारण अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार भइरहेको छ।
नारायणी अस्पताल यतिखेर ७० जना कोरोना संक्रमितलाई निको बनाउन दिनरात खटिरहेको छ। तर यो त्यति सहज छैन। नयाँ संक्रमित आए उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था छ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मदन उपाध्यायले बताए। शय्या अभाव भएका कारण बुधबार मात्र २० कोरोना संक्रमितलाई फिर्ता गरेको उनले जानकारी दिए। अस्पतालमा भर्ना भएका सबै संक्रमितमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको उनले बताए।
नेपालमा माघ ९ गते पहिलो संक्रमित भेटिएलगत्तै नारायणी अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयारी अघि बढाएको थियो।
नारायणी अस्पतालले सम्भावित संक्रमितलाई चैत ६ गतेबाट भर्ना लिन सुरु गरेको थियो। अस्पतालमा वैशाखबाट मात्र कोरोना संक्रमित भर्ना भएका हुन्। त्यो समय अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ५ शय्याको आइसोलेसन वार्ड छुट्याएको थियो।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यस अस्पतालले ५ शय्याबाट २५ अनि ५० गर्दै अहिले ७० शय्याको व्यवस्था गरेको छ। तर संक्रमितको चाप अनुसार ७० शय्या अपुग भएको डा उपाध्यायले बताए।
उनले भने, ‘सुरुमा ५ शय्याको मात्र आइसोलेसन वार्ड छट्याएका थियौं। तर संक्रमितको संख्या यति धेरै बढ्यो, अहिले ७० शय्या पनि अपुग भएको छ। शैय्या नभएर बुधबार मात्र २० संक्रमितलाई फिर्ता पठाउन बाध्य भयौं।’
हुन त नारायणी अस्पताल ३ सय शय्या क्षमता भएको अस्पताल हो। तर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्न फरक व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। अस्पतालको संरचना पुरानो भएका कारण संक्रमितलाई सहजै राख्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
संक्रमितको संख्या थोरै हुँदा नारायणी अस्पतालले २०÷२५ जना चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाउने गथ्र्यो। तर संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए। एक दिनमा कम्तीमा पनि ३०÷४० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउनुपर्ने डा उपाध्यायले बताए। हाल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालले एक हप्तामा ६ वटा टोली खटाउँदै आएको छ।
डा उपाध्यायका अनुसार संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। भन्छन्, ‘पहिले एक हप्तामा ६ वटा टोली खटिन्थे। उनीहरुलाई नै अलि बढी खटाउनुपर्ने देखियो। कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउँदै छौं।’
कोरोना उपचारका लागि अहिले १ सय ५० चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएका छन्। तर संक्रमितको दर हेर्दा करिब ३ सय जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक भएको उनले बताए।
कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन गर्न छोटो समयकै लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए। कर्मचारी नबढाएसम्म संक्रमितको उपचार सहज नहुने उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिरहँदा उनले मेडिकल टिमबाट पाएको जस्तो साथ अन्य निकाय र विभागबाट भने खासै पाएका छैनन्। अस्पताल भित्रकै विभागबाट मात्र नभई अन्य सरकारी निकायबाट पनि खासै सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको क्वारेन्टाइनका लागि होटलको व्यवस्था गरेको छ। हाल करिब २० जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा छन्।
अस्पतालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट केही सहयोग पाए पनि प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय लगायत अन्य निकायबीच समन्वय र सहयकार्यको अभाव छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य कार्यालय लगायत निकायबाट जति सहजीकरण हुनुपर्ने हो। त्यो निकै कम छ। समन्वयको अभाव छ।’
संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङ र स्वाब संकलनको काम पनि अस्पताल आफैंले गरिरहेको छ। उनले भने, ‘कन्ट्याक ट्रेसिङमा को जाने? फिल्डमा गएर स्वाब कसले संकलन गर्ने? नगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय कोही पनि अगाडि आएको छैन। हरेक ठाउँमा अस्पतालकै कर्मचारी जानुपर्ने अवस्था छ। यी निकायबीच समन्वय र सहकार्यको एकदमै खाँचो छ।’
कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला कोभिड अस्पतालको संख्या बढाउनुपर्ने र भएका अस्पताललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती, उत्प्रेरणाको अभाव, अस्पतालको पुरानो संरचना, समन्वयको अभावका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए।
संक्रमितको उपचारका लागि डा उपाध्याय दिनरात खटिएका छन्। ‘अहिले मेरो सामु धेरै चुनौती छन्। गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यसैले मलाई यो २४ घन्टा पनि निकै कम लाग्न थालिसक्यो।’